Together Festival Yangon 2018 ရဲ့ International DJ Lineup တွေအကြောင်း
Together Festival Yangon 2018 ရဲ့ International DJ Lineup တွေအကြောင်း တစေ့တစောင်း
4 May 2018 . 3:39 PM
နှစ်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံက Raver တွေ အကြီးအကျယ်ဝုန်းကြ၊ ဆင်နွှဲလာကြတဲ့ Together Festival ကြီးကတော့ (၄) နှစ်မြောက်အနေနဲ့ မနက်ဖြန် မေလ (၅) ရက်၊ စနေနေ့မှာ Thuwunnabhumi Event Park ကြီးကို ရောက်ရှိလို့ လာပြန်ပါပြီ။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး DJ ( ၂ ကြိမ်) ရရှိထားတဲ့ Hardwell ကြီးနဲ့အတူ တခြား ကမ္ဘာကျော် DJ တွေ ဖြစ်တဲ့ 4B, Brohug ၊ G.T.A , Matisse & Sadko တို့တွေတင်မက Local DJ တွေအနေနဲ့လည်း Aladin ၊ Double U ၊ OUJ တို့က လာရောက်ပါဝင်ဖျော်ဖြေမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလူတွေရဲ့ အကြောင်းကို သွားမကဲခင် နွှေးရအောင် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Hardwell အကြောင်းကတော့ ထူးပြီး ပြောဖို့ မလို သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ Hardwell ရဲ့ နာမည်ရင်းက Robbert van de Corput ဖြစ်ပြီး အသက် (၃၀) ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ Hardwell ရဲ့ စတိုင်တွေကတော့ Electro House ၊ Progressive House Music၊ Big Room House ၊ Dutch House စတိုင်စုံပါတယ်။ DJ Mag မဂ္ဂဇင်းရဲ့ World No. (1) DJ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာတော့ World Top Ten DJ 100 မှာ သူ့အနေနဲ့ နံပါတ် (၄) နေရာက ရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။
Hardwell ကို Ultra Music Festival ၊ Sunburn နဲ့ Tomorrowland Festival တို့မှာ ဖွင့်တဲ့ ပုံစံတွေကြောင့် လူသိများခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာလည်း 808 Festival မှာ ဖျော်ဖြေဖူးပြီး စင်အောက်မှာ ရန်ဖြစ်တာကို လှမ်းတားတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကိုတော့ အမှတ်ထင်ထင်ရှိကြမှာပါ။ လက်ရှိလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့လည်း Steve Aoki feat.Kris Kiss တို့နဲ့ Anthem ဆိုတဲ့ Track အလန်းစားကြီးတစ်ပုဒ်ကို ဧပြီ ၁၃ ရက်နေ့က တင်ထားပါတယ်။ Together Festival မှာ Hardwell တစ်ယောက် ဘယ်လိုဖြုတ်မယ်ဆိုတာတော့ ရင်ခုန်စရာပါ။
4B ကတော့ အမေရိကန်လူမျိုး DJ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Skrillex ၊ Diplo ၊ Tiesto နဲ့ DJ Snake တို့ရဲ့ အားပေးမှုတွေ ရရှိခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ 4B ရဲ့ Trademark ဖြစ်တဲ့ “Pop Dat” Track ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ထွက်ရှိပြီးတည်းက ၂၀၁၆ ခုနှစ်ရဲ့ အဖွင့်ရဆုံး Trap Song တွေထဲက တစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်းမှာလည်း ပွဲကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Hard Summer ၊ Coachella နဲ့ ULTRA Miami တို့မှာ ဖွင့်ခဲ့ရပြီး အခု Together Festival့ Yangon မှာလည်း သူ့ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှုက ဘယ်လိုဆိုတာ ရင်ခုန်စရာ တွေ့ရမှာပါ။
Brohug ကတော့ ဆွီဒင်လူမျိုး DJ နဲ့ Music Producer သုံးယောက်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး Christopher Lunde ၊ Niklas Lunde နဲ့ John Dahlback တို့ဖြစ်ကာ သူတို့အားသန်တဲ့ Music Style တွေကတော့ Bass House၊ Brohouse ၊ Future House တွေ ဖွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ပွဲဦးထွက် Single “In the Morning” ကိုတော့ ဇူလိုင် ၂၀၁၆ မှာ ထွက်ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ဘယ်လ်ဂျီယံမှာလုပ်မယ့် Tomorrowland ရဲ့ Lineup မှာလည်း သူတို့ပါပါတယ်။ ကဲ! ဒီတော့ Together Festival Yangon 2018 မှာလည်း ဘယ်လိုတွေ လန်းမလဲ ဆက်လက်စောင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။
Good Time Ahead လို့ နာမည်အရှည်ရှိတဲ့ GTA ဟာ Miami က DJ နှစ်ယောက်တွဲဖြစ်ပြီး House ၊ Electro House ၊ Trap နဲ့ Hip Hop တွေ ဖွင့်တတ်ပါတယ်။ အဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Julio Mejia နဲ့ Matt Toth တို့ရဲ့ GTA ဟာ DJ Ladiback Luke ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ သီချင်းတွေ ဖန်တီးပြီးတဲ့အခါ နာမည်ကြီး Diplo ရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘဲတွေဟာ Rihanna ရဲ့ ၂၀၁၃ Diamonds World Tour မှာလိုက်ပါဖူးသလို Calvin Harris & Tiesto တို့ရဲ့ Greater Than World Tour တွေမှာလည်း ဖျော်ဖြေဖူးပါတယ်။
သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ နှစ်ယောက်တွဲလည်း အလုပ်လုပ်သလို တစ်ယောက်ချင်းစီလည်း JWLS နဲ့ Van Toth ဆိုပြီး တစ်ယောက်ချင်းလည်း ဂီတတွေ ဖန်တီးကြတာ ရှိပါတယ်။ သူတို့ ထွက်ထားတဲ့ Vince Staples နဲ့ တွဲလုပ်ထားတဲ့ Little Bit of This ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ အရမ်းမိုက်တာမို့ ရန်ကုန်မှာရော ဘယ်လို အကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေမှာလဲ ကြည့်ရမှာပါ။
MARTIN GARRIX AND MATISSE & SADKO
ဒီဘဲတွေကတော့ ရှရှားတွေဖြစ်ပြီး Progressive House ၊ Big Room House စတိုင်တွေ တီးတတ်သူတွေပါ။ သူတို့ကို DJ Martin Garrix နဲ့ တွဲလုပ်တဲ့ Tracks တွေ ဖြစ်တဲ့ Dragon ၊ Forever ၊ Break Through The Silence နဲ့ Together တို့ကြောင့် သိကြတာများပြီး အကောင်းမြင်မှတ်ချက်တွေလည်း ရခဲ့ဖူးသူပါ။ YouTube မှာ သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်ပြီး သူတို့နဲ့ လိုက်မျောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မနက်ဖြန် Together Festival ကို အရောက်သွားဖို့တော့ လိုတယ်နော်။
Let’s Rave together!!!
Together Festival Yangon 2018 ရဲ့ International DJ Lineup တှအေကွောငျး တစတေ့စောငျး
နှဈတိုငျး မွနျမာနိုငျငံက Raver တှေ အကွီးအကယျြဝုနျးကွ၊ ဆငျနှဲလာကွတဲ့ Together Festival ကွီးကတော့ (၄) နှဈမွောကျအနနေဲ့ မနကျဖွနျ မလေ (၅) ရကျ၊ စနနေမှေ့ာ Thuwunnabhumi Event Park ကွီးကို ရောကျရှိလို့ လာပွနျပါပွီ။
ဒီတဈခါမှာတော့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး DJ ( ၂ ကွိမျ) ရရှိထားတဲ့ Hardwell ကွီးနဲ့အတူ တခွား ကမ်ဘာကြျော DJ တှေ ဖွဈတဲ့ 4B, Brohug ၊ G.T.A , Matisse & Sadko တို့တှတေငျမက Local DJ တှအေနနေဲ့လညျး Aladin ၊ Double U ၊ OUJ တို့က လာရောကျပါဝငျဖြျောဖွမေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလူတှရေဲ့ အကွောငျးကို သှားမကဲခငျ နှေးရအောငျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Hardwell အကွောငျးကတော့ ထူးပွီး ပွောဖို့ မလို သိပွီးသားဖွဈမှာပါ။ Hardwell ရဲ့ နာမညျရငျးက Robbert van de Corput ဖွဈပွီး အသကျ (၃၀) ရှိပွီဖွဈပါတယျ။ Hardwell ရဲ့ စတိုငျတှကေတော့ Electro House ၊ Progressive House Music၊ Big Room House ၊ Dutch House စတိုငျစုံပါတယျ။ DJ Mag မဂ်ဂဇငျးရဲ့ World No. (1) DJ ကို ၂၀၁၃ ခုနှဈနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှဈမှာ နှဈကွိမျဆကျတိုကျရရှိခဲ့ပါတယျ။ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာတော့ World Top Ten DJ 100 မှာ သူ့အနနေဲ့ နံပါတျ (၄) နရောက ရပျတညျနခေဲ့ပါတယျ။
Hardwell ကို Ultra Music Festival ၊ Sunburn နဲ့ Tomorrowland Festival တို့မှာ ဖှငျ့တဲ့ ပုံစံတှကွေောငျ့ လူသိမြားခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ ရနျကုနျမှာလညျး 808 Festival မှာ ဖြျောဖွဖေူးပွီး စငျအောကျမှာ ရနျဖွဈတာကို လှမျးတားတဲ့ အဖွဈအပကျြလေးကိုတော့ အမှတျထငျထငျရှိကွမှာပါ။ လကျရှိလှုပျရှားမှုအနနေဲ့လညျး Steve Aoki feat.Kris Kiss တို့နဲ့ Anthem ဆိုတဲ့ Track အလနျးစားကွီးတဈပုဒျကို ဧပွီ ၁၃ ရကျနကေ့ တငျထားပါတယျ။ Together Festival မှာ Hardwell တဈယောကျ ဘယျလိုဖွုတျမယျဆိုတာတော့ ရငျခုနျစရာပါ။
4B ကတော့ အမရေိကနျလူမြိုး DJ တဈယောကျဖွဈပွီး ဆရာကွီးတှဖွေဈတဲ့ Skrillex ၊ Diplo ၊ Tiesto နဲ့ DJ Snake တို့ရဲ့ အားပေးမှုတှေ ရရှိခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။ 4B ရဲ့ Trademark ဖွဈတဲ့ “Pop Dat” Track ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ ထှကျရှိပွီးတညျးက ၂၀၁၆ ခုနှဈရဲ့ အဖှငျ့ရဆုံး Trap Song တှထေဲက တဈပုဒျဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈတှငျးမှာလညျး ပှဲကွီးတှဖွေဈတဲ့ Hard Summer ၊ Coachella နဲ့ ULTRA Miami တို့မှာ ဖှငျ့ခဲ့ရပွီး အခု Together Festival့Yangon မှာလညျး သူ့ရဲ့ ဖြျောဖွမှေုက ဘယျလိုဆိုတာ ရငျခုနျစရာ တှရေ့မှာပါ။
Brohug ကတော့ ဆှီဒငျလူမြိုး DJ နဲ့ Music Producer သုံးယောကျအဖှဲ့ဖွဈပွီး Christopher Lunde ၊ Niklas Lunde နဲ့ John Dahlback တို့ဖွဈကာ သူတို့အားသနျတဲ့ Music Style တှကေတော့ Bass House၊ Brohouse ၊ Future House တှေ ဖှငျ့လရှေိ့ပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ပှဲဦးထှကျ Single “In the Morning” ကိုတော့ ဇူလိုငျ ၂၀၁၆ မှာ ထှကျရှိခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ဘယျလျဂြီယံမှာလုပျမယျ့ Tomorrowland ရဲ့ Lineup မှာလညျး သူတို့ပါပါတယျ။ ကဲ! ဒီတော့ Together Festival Yangon 2018 မှာလညျး ဘယျလိုတှေ လနျးမလဲ ဆကျလကျစောငျ့ကွညျ့လိုကျရအောငျဗြာ။
Good Time Ahead လို့ နာမညျအရှညျရှိတဲ့ GTA ဟာ Miami က DJ နှဈယောကျတှဲဖွဈပွီး House ၊ Electro House ၊ Trap နဲ့ Hip Hop တှေ ဖှငျ့တတျပါတယျ။ အဖှဲ့ဝငျနှဈယောကျဖွဈတဲ့ Julio Mejia နဲ့ Matt Toth တို့ရဲ့ GTA ဟာ DJ Ladiback Luke ရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ သီခငျြးတှေ ဖနျတီးပွီးတဲ့အခါ နာမညျကွီး Diplo ရဲ့ စိတျဝငျစားမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီဘဲတှဟော Rihanna ရဲ့ ၂၀၁၃ Diamonds World Tour မှာလိုကျပါဖူးသလို Calvin Harris & Tiesto တို့ရဲ့ Greater Than World Tour တှမှောလညျး ဖြျောဖွဖေူးပါတယျ။
သူတို့နှဈယောကျဟာ နှဈယောကျတှဲလညျး အလုပျလုပျသလို တဈယောကျခငျြးစီလညျး JWLS နဲ့ Van Toth ဆိုပွီး တဈယောကျခငျြးလညျး ဂီတတှေ ဖနျတီးကွတာ ရှိပါတယျ။ သူတို့ ထှကျထားတဲ့ Vince Staples နဲ့ တှဲလုပျထားတဲ့ Little Bit of This ဆိုတဲ့ သီခငျြးဟာ အရမျးမိုကျတာမို့ ရနျကုနျမှာရော ဘယျလို အကောငျးဆုံးဖြျောဖွမှောလဲ ကွညျ့ရမှာပါ။
ဒီဘဲတှကေတော့ ရှရှားတှဖွေဈပွီး Progressive House ၊ Big Room House စတိုငျတှေ တီးတတျသူတှပေါ။ သူတို့ကို DJ Martin Garrix နဲ့ တှဲလုပျတဲ့ Tracks တှေ ဖွဈတဲ့ Dragon ၊ Forever ၊ Break Through The Silence နဲ့ Together တို့ကွောငျ့ သိကွတာမြားပွီး အကောငျးမွငျမှတျခကျြတှလေညျး ရခဲ့ဖူးသူပါ။ YouTube မှာ သူတို့ရဲ့ ဖနျတီးမှုတှကေို ကွိုကျနှဈသကျပွီး သူတို့နဲ့ လိုကျမြောခငျြတယျဆိုရငျတော့ မနကျဖွနျ Together Festival ကို အရောကျသှားဖို့တော့ လိုတယျနျော။